टरुवामा चिन्ता, टर्ला त कतारको संकट !
Fri, Jun 22, 2018 | 01:21:06 NST
18:29 PM ( 1 year ago )
Total Views: 24.3 K
नवलपरासी, असार ५ - नवलपरासीको कावासोती–७ टरुवाका टेकनारायण महतो कतारमा गाडी चलाउनुहुन्छ । उहाँकै कमाइले टरुवामा टरेको छ, ६ जना परिवारको गुजारा । तर कतारमा देखिएको पछिल्लो संकटले के हुने हो भन्ने चिन्ता परेको छ ।
कतारसित छिमेकी देशले सम्बन्ध तोडेको भोलीपल्टै टेकनारायणले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘अब काम पाइएला जस्तो छैन, फर्किनु पर्छ होला !’ टेकनारायण फर्किने कुराले परिवारलाई खुशी बनाएन । झनै समस्या थपिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले दुःखी पनि बनाएन ।
कतारको यो घटना थाहा पाउनासाथ बुबा गोविन्दले कतारमा भएका आफन्तलाई पनि सोध्नु भयो । तर मान्छे अनुसारका फरक फरक भनाई आए । कसैले केही फरक पर्दैन भने त कसैले हाम्रो रोजिरोटी गुम्दैछ भने । छोरा टेकनारायणले पनि यसै हुन्छ भन्न सकेका छैनन् ।
टेकनारायणले साउदीबाट दुध ओसारेको पैसाले उहाँका तीन जना बालबच्चा पढ्न पाएका छन् । तर साउदीको जमिनमा कतारका गाडी कुद्न पाउन छाडेका छन् । टेकबहादुरको दुध ओसार्ने काम बन्द भएपछि श्रीमती र बा आमालाई पनि खर्चबर्चको आशा टुट्ने चिन्ता छ ।
टेकबहादुरको कमाई मासिक दुई हजार रियाल हुन्छ । टेकनारयाण कतार बस्न थालेको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा तीन पटक छुट्टिमा घर आउनु भएको थियो । १२ वर्ष ढुक्कले बिताएको छोराको चिन्ता अहिले परेको छ गोबिन्दलाई, ‘अब कतारमा के होला ?’
टेकनारायणलाई छिटो बोलाउन आमाले ताकेता गर्छिन् । तर अब कतारमा के हुन्छ भन्ने नजानि बोलाउन मन छैन गोविन्दलाई । कमाई रहेको छोरालाई बोलाउन जाति लागेको छैन, ‘हाम्रो छोराले पढेको छैन, भोलि यहाँ आएर पनि के गर्ने र’ गोविन्दले भन्नुभयो, ‘मैले पनि चुनाव हारें ।’
पहिलो चरणको चुनावमा कावासोती–७ बाट वडाध्यक्षमा उठेका गोविन्द ६९ भोटले हार्नुभयो । नेकपा एमालेले टिकट दिए पनि गोविन्दलाई नागरिकले जित्नेगरि भोट दिएनन् । जसले गर्दा गाउँको विकासमा अगुवाई गर्ने गोविन्दको सपना पूरा भएन । गोविन्दले भन्नुभयो, ‘हुने र चाहिने मात्रै योजना सुनाएँ पत्याएनन्, हावा कुरा गर्न मन लागेन, चुनाव हारें ।’
चुनावको माहोलबाट पन्छिएका गोविन्दलाई अहिले छोराको जागिर गुम्लाकि भन्ने चिन्ता त छनै तर त्याे भन्दा बढी चिन्ता छ छोरा अप्ठेरोमा पर्ला कि !
भिसा लागे पनि गएनन् प्रेमसागर
टरुवाकै प्रेमसागर महतोको पनि कतारको भिसा लागेको दुई हप्ता भयो । रेडकोलर म्यानपावर कम्पनीले प्रेमसागरलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर कतारमा देखिएको पछिल्लो समस्या थाहा पाएपछि उहाँलाई तत्काल जान मन छैन । भोलि समस्या थपिंदै गयो भने आपत आइलाग्ला कि भन्ने चिन्ता छ ।
प्रेमसागरका ठूलो बुबाका छोरा र भिनाजु कतारमै काम गर्छन् । उनीहरुले अहिले तत्काल नआउनु भनेपछि रोकियो प्रेमसागरको कतार यात्रा ।
म्यानपावरले भने कुनै समस्या हुँदैन भन्दै पैसा लिएर आउन भनेको छ । तर प्रेमसागरका बुबा गंगारामलाई परदेशको बारेमा राम्रैसँग थाहा छ । गंगाराम पनि साउदीमा अढाई वर्ष र अफगानिस्तानमा ३३ महिना गाडी चलाएर फर्किनु भएको हो ।
गंगारामलाई छोरो विदेशनै पठाउनु पर्ने वाध्यता पनि छैन । आफ्नै कमाइले १५ कट्ठा जमिन जोडेर पक्की घर बनाउनु भएको छ । तीन वटा घडेरी पनि किन्नु भएको छ । अहिले गाउँमा पनि गंगारामले तरकारी खेती गरेर रोजिरोटीको मेसो मिलाउनु भएको छ ।
गाडि चलाउने काममा जान लागेका छोरालाई कतारको समस्या समाधान नभइ नपठाउने अठोट उहाँसँग छ । गंगारामले भन्नुभयो, ‘बरु नेपालमै गाडी कुदाउँछ, राम्रो भएन भने कतार पठाउँदिन, बुझ्दै छु ।’
केहि हप्ता पहिले कतारसित छिमेकी सात देशले कुटनितिक सम्बन्ध तोडेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीको भविश्य के होला भनेर चिन्ता सुरु भएको छ । कतारको रोजगारीका लागि भिसा लागेका युवा पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
अनि कतारमै काम गरिरहेकाहरुका परिवारलाई पनि अब के होला भन्ने चिन्ता छ, अहिले नै फर्काउने कि अझै केही समय बिचार गर्ने !